Dominican Tourism Kudzorera Kwenhema? Zvinoshamisa zvaSimpson Zvinotarisa Chokwadi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Dominican Republic Kuvhuna Nhau » Dominican Tourism Kudzoka Kwenhema? Zvinoshamisa zvaSimpson Zvinotarisa Chokwadi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Dominican Tourism Kudzoka Kwenhema? Zvinoshamisa zvaSimpson Zvinotarisa Chokwadi
Mhedzisiro yedenda rekushanya pasirese uye zvichidaro pahupfumi hwenyika hwave hwakakura. Mupiro wekushanyirwa kuGlobal Gross World Product muna 2020 - $ 4.7 trillion - yaive hafu yeiyo ya 2019. Mune bepa richangoburwa, director general anoona nezve United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) anofungidzira kuti tariro mamiriro, pakupera kwegore, tichava 60% pazasi pe2019.
Nekushanya kuri chinhu chakakosha muhupfumi hwenyika, kudzoreredza munyika dzese kwakakosha.
Munguva pfupi yapfuura iyo Dominican Ministry of Tourism yakaratidza dhata inoratidza kuti chikamu ichi chiri kupora zvinoshamisa.
Kunyange dhata iri ichokwadi, dudziro yacho inogona kusiya mumwe achibvunza chiratidzo chekupora kwakadai.
Kudzoreredza chinangwa chenyika dzese, nekuti kushanya kwakakosha chikamu chehupfumi hwenyika, asi kunyanya kune avo vane ushanyi sechinhu chakakosha muhupfumi.
Mumavhiki mashoma apfuura, Dominican Ministry of Tourism yakapa dhata yaizoratidza kupora uye kunoshamisa kupora kweDominican kuri kuuya kwekushanya. Dhata dzakarurama, asi dudziro yavo inoda ongororo inoisa humbowo mwenje nemumvuri wekudzoka uku, zvichibva pane data repasirese rinosanganisa data rakasarudzika rehunhu hwakasiyana.
Kwemakore makumi mashanu, chiitiko chakave chakadzidzwa icho pachokwadi chakange chacherechedzwa anopfuura zana zana apfuura, chirevo chaSimpson. Mhedzisiro mhedzisiro inogona kusvika kana manhamba achibatanidza isina-homogeneous dhata. Pasina kupinda mune zvakadzama zveiyi dzidziso yemasvomhu, isu tinoona kuti inobvumidza kunzwisisa mimwe miganho yedudziro yedata neDominican Ministry of Tourism, data, rine chokwadi, isu tinodzokorora kudzivirira kusanzwisisana, haina kubvunzwa.
Kukosha kwekunzwisisa iyi miganho hakudi kuregererwa munyika umo, muna 2019, nenzira yemari yekunze, kutashanya kwakapa 8.4% kuGDP, inomiririra 36.4% yezvinhu zvinotumirwa kunze kwenyika. Zvakare, kushanya, zvisinei ne13% kukotama zvichienzaniswa ne2018, kwakapa mu2019 kusvika ingangoita 30% yeEkunze Kunze Investment.
Nezvikonzero izvi, kunyatso simbisa chirevo icho muDominican Republic, chikamu chezvekushanya chiri kusiira kumashure dambudziko rakakonzerwa ne COVID-19 denda rakakosha kumatongerwo enyika, pamwe nekutungamira sarudzo diki dzevashandi vekambani iyi.
Ngatirangarirei data hombe rakataurwa neBazi.
- Vasiri-vagari vanosvika nendege, muna Nyamavhuvhu gore rino, vanomiririra 96% yeavo mu2019, chiitiko chinopfuura kusimbiswa nezvakaitika muhafu yekutanga yaGunyana.
- Iyi tsika inosimbiswa nekuongororwa kwemwedzi wekupora kwechiratidzo ichi kubva pakapora. zvichienzaniswa ne2019, yanga ichikura, kubva pa34% munaNdira-Kukadzi, kusvika panosvika 50% munaKurume-Kubvumbi, kusvika padhuze ne80% muna Chivabvu-Chikumi uye 95% muna Chikunguru-Nyamavhuvhu.
- Vanosvika vevasiri-veDominican vagari vanga vachikura zvakatsiga kwemwedzi gumi.
- Iyo muzana yevashanyi vanogara mumahotera iri 73%.
Aya ese echokwadi uye akanyorwa data. Nekudaro, Simpson anotiyeuchidza kuti anoreva masampuli anounganidza mapoka akasiyana uye nguva dzakasiyana.
Kuongororwa kwese kwenguva kunenge kuri kwechokwadi dai pakanga paine kugadzikana mukusvika padanho remwedzi munguva yakasarudzwa yekuenzanisira. Izvi zvaive zvisiri izvo, uye mwedzi we2019 haina kuenzana nekuenzanisa kwakadaro na2021. Gore iro, vashanyi vekushanya vakabata ruoko migumisiro yekufa kwevamwe vashanyi pakati paMay naJune, izvo zvakadzosera kukura mukushanya kweNorth America kwakanyorwa. muhafu yekutanga yegore (ingangoita 10%) kudonha 3% mukati memwedzi gumi yekutanga (4% kana vese vasvika vekunze vakatariswa).
Izvi zvinoda kusiyanisa huwandu hweiyo 96% muna Nyamavhuvhu kana inopfuura 110% mukutanga kwemavhiki maviri emwedzi uno nekuda kwekudzokororwa kwenhamba (2021 vanosvika) uye zvakadii pakuderera mune dhinomineta (vanosvika 2019).
Mhedzisiro iyi inorema kunyanya kana vanosvika vakadonhedzwa zvichibva nechimwe chinhu chekusagadzikana, kusiyanisa avo veDominican vasiri-vagari kubva kune vevatorwa.
Tinoita saizvozvo patafura inotevera patinoisa izvi data, yemwedzi waNdira-Nyamavhuvhu, kutanga muna2013.
Gore 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Idzi data, pasina kupokana mukuenzaniswa kweHurumende kwemwedzi waNyamavhuvhu, vanodzikamisa, zvichipiwa kuti pamusoro pemwedzi misere, vanosvika vese vari 60% yeavo e2019 uye tinofanirwa kudzokera kuna 2013 kunotsvaga yakaderera nhamba. . Iyi yekufananidza yekupedzisira inoreva iyo yakazara data, asi dai isu taizogadzirisa izvo zvevatorwa vega, izvi zvaizopa 53%, tichienzanisa na2019, uye 72%, tichienzanisa na2013.
Kufungidzirwa kwevatorwa vasiri-vagari kwakakosha nekuti veDominican vasiri-vagari vemunyika vangangoita vashoma kushandisa mamwe mabasa senge mahotera, maresitorendi, kutakura. Uku kusanyatso nyepedzera kunotsigirwa nekugara kwehotera, uko, kunyangwe vari vekunze 86% yeavo vakabvumidzwa, iri pasi peichi chiyero, nepo zvichitarisirwa zvikamu zviviri muzana zvaimbove zvakafanana.
Kune imwezve isina-homogeneous dhata inoenderana neyekuwanda kwekushanya iyo inofanirwa kuve yekunetsekana. Iyi data, yakapihwa mutafura inotevera, inoreva kuparara kwevanosvika nenharaunda yekwakabva kune vasiri-vagari.
Gore North America Europe South America Central America
Ruzivo rwakanyanya kukosha pakuratidza kwedu kukura kweyekushanya kweNorth America kunoperekedzwa nekuderera kweizvozvo kubva kuEurope. Kana iyi data ikafungidzirwa pamwe neiyo yakabatana nenyika, ine zvimiro zvisina kunangana zvatakataura nezvazvo, zvinoita sekunge kukanganisa kwekudzikira kwekushanya kweEuropean hakugone kubhadharwa nekuwedzera kwekushanya kweNorth America.
Ichi chirevo chinotsigirwawo nedata reEuropean nezvekudzoserwa kweEuropean traffic traffic. Iko kuenzanisa pakati peiri zhizha nemakore apfuura kunoratidza kuti chete 40% yemotokari ye2019 yakawanikwazve, pamwe nekuvandudzwa zvichienzaniswa ne2020, apo kupora kwanga kuri 27%. Uye zvinofanirwa kuwedzerwa kuti traffic yemumhepo haisi chiratidzo chakafanana, nekuti muEurope pakave nekudzikisira kushoma kwetraffic iyo inofanirwa kufarira vazhinji veDominican Republic, iyo yendege dzinoenda kune dzimwe nyika. Muchokwadi, idzo dzakanyanya kupora dzaive dzemukati-eEuropean dzakachipa mutengo ndege. Nhasi, vanomiririra 71.4% yeiyo yakazara, nepo makore maviri apfuura vakangomiririra 57.1% chete, uye hazvifanire kufuratirwa kuti nzvimbo dzinopa zvakanyanya kumhedzisiro iyi, neimwe nzira, dzinomiririra dzimwe nzira dzevashanyi veCaribbean.
Kune uyu anofanirwa kuwedzera kuti matanho eEuropean Green Pass haafarire kushanya kuEurope kana nekuti jekiseni rinonyanya kushandiswa muDominican Republic, Sinovac haibvumire kugamuchira iyo Green Pass. Izvi zvinogona kusahadzika, asi zvinokanganisa chikamu chemasangano ekufambisa, kuitira kuti mufananidzo unoguma uve wekuti pachine nzira refu yekufamba kushanya kwekuDominican kusati kwadzokera kune ayo pre-denda mazinga.
Kuverenga kudzoreredzwa kwemamiriro ekurwara-denda semhedzisiro yekudzora denda iri pamwe rine tariro, uye mune chero mamiriro ezvinhu, zvinoita kunge zvisingaite munguva pfupi.
Izvi zvinoreva kuti, pasina kupa kukoshesa kwakanyanya kuvandudzwa kwemashoma madhesimali mune aya mapesenti, zvakafanira kufunga pamusoro pemitemo yekumutsiridza inotarisa panguva yepakati ya2023.
Chirevo chazvino neWorld Travel uye Tourism Council inotsigira zviito zvinofambiswa nehurumende, sekudyara nekukwezva kudyara kwekambani yakazvimirira muzvivakwa nemadhijitari nekusimudzira zvikamu zvekufamba, sekushanya kwekurapa kana kushanya kweMICE. Izvi zvinoreva mutemo wepasirese, usiri-chikamu unosanganisirawo mamwe mativi enharaunda.
Kufunga kwakafanana kwakaitwa mwedzi miviri yapfuura nemukuru mukuru anoona nezve UNCTAD, achimanikidza kudiwa kwekufungisisa mhando yekusimudzira yekushanya, kusimudzira kushanya kwenyika uye kwekumaruwa, uye kuita digitalize.
Zvivakwa zviripo munyika zvinobvumidza zviito izvi, uye izvi zvinoda mutemo wakasimba wekusimudzira, wakabatana nevemasangano akazvimirira, pasina kugutsikana nenyaya yekuti kumwe kumuka kuri kuitika. Ichokwadi kuti pakupera kwegore rino kwaive nemamiriyoni mana nemashanu kana mashanu emamiriyoni ekusvika, zvichiri zvishoma kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, hazvigone kuita musiyano mukuru, kunze kwekunge mamiriro akagadzirwa ekumutsiridza kwakasimba chikamu ichi, icho chinobvumira nyika chengetedza chinzvimbo chayo chinotungamira mukushanya kweCaribbean.